कोरोना सं,क्र,मण प्रभाव : सुनसान ब,न्दै राजधानी भिडियो) – " सुलभ खबर "
कोरोना सं,क्र,मण प्रभाव : सुनसान ब,न्दै राजधानी भिडियो)
काठमाडौं : बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले १५ बुँदे निर्णय गर्दै आंशिक ‘लक डाउन’को घोषणा गर्यो।अत्यावश्यक काम बाहेक आवतजावत, हिँ,ड,डु,ल नगर्ने, सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यमा पार्टी प्यालेसमा भोज नगर्ने, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी मानिसहरु भेला हुन ब,न्द गर्ने निर्णय गर्यो।
सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयको पढाइसँगै सम्पूर्ण परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गर्यो। यसको प्रभाव बिहीबार नै राजधानीका सडकमा देखिएको छ। धेरै मानिसले बिहीबार राजधानी छोडेका छन् भने कतिपय सर्वसाधारण कोरोना संक्रमण त्रासले बाहिर निस्किन डराए। काठमाडौंको न्युरोड, बसन्तपुर, ठमेर र दरबारमार्गमा देखिएका दृश्यलाई हामीले देखाउने प्रयास गरेका छौँ।
न्युरोड सडकमा सवारी चाप छैन। पसल पुरै खुलेपनि भिडभाड देखिँदैन। फुटपाथमा हात धुनका लागि पानी र साबुन राखिएको छ। यस्तै विशाल बजारमा पनि खासै चहल पहल देखिँदैन।बसन्तपुर पनि सुनसान देखिन्छ। पर्यटक कम देखिन्छन्। व्यापारीको पसल थापे पनि ग्राहकको भिडभाड छैन। पर्यटकको पर्खाइमा रहेका रिक्साचालक २०७२ वैशाखको भूकम्पले भत्किएका मन्दिर र ऐतिहासिक भवन नजिकै लामबद्ध छन्।
व्यापार नभएको उनीहरुको गुनासो छ। ‘व्यावसाय डामाडोल छ। पहिला ग्रुप नै लिएर हिँड्थे। अहिले पर्यटकनै छैनन्’, रिक्सा चालक रामबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला दिनमा १२ देखि १५ सयसम्म कमाइहुन्थ्यो अहिले यो रोगले गर्दा पर्यटक आउन छाडे। अहिले त पेट पाल्नै गाह्रो छ।’
कैलालीका गोपाल विश्वकर्माले यस क्षेत्रमा रिक्सा चलाएको १५ वर्ष भयो। तर, अहिले कमाई नभएको गुनासो गर्छन्। कोरना भाइरसको कारणले परिवार पाल्न गा,ह्रो भो’, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पहिला दैनिक हजार १२ सय कमाइ हुन्थ्यो। अहिले चाइनिज पर्यटक आएका छैनन्। अरु देशका पनि छैनन्। कमाइ नै छैन।’ठमेल क्षेत्रसमेत सुनसान छ। सवारी साधन र मान्छेको चहलपहल घटेको छ भने सडकसडकमा देखिने सारङ्गी बाधकसमेत छैनन्।
सं,क,टमा हराएका छैनन्‌ डा. गोविन्द केसी, बचाइरहेकाछन सुदूरका बिरामी !
डडेल्धुराः विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका
फ्रान्सबाट आएकी कोरोना संक्रमित नेपाली युवतीले विमानस्थलको भद्रगोल देखेपछि …..
‘म पेरिसबाट दोहा हुँदै आज काठमाडौं आएँ । यहाँको परिस्थिति लाजमर्दो रहेछ । विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा एउटै
फ्रान्सबाट आएकी संक्रमित युवतीसँगै आएका तेह्र जनामा भाइरस फेला परेन
काठमाडौँ। कोरोना भाईरस (कोविड १९) को आशंकामा नमूना सङकलन गरी परीक्षणमा पठाइएका उदयपुरका १३ जनामा
२३ वर्षको कलिलै उमेरमा को’रोनाले लियो अरुलाई बचाउन खटेका स्वास्थ्यकर्मी ज्यान !
एजेन्सी , बेलायतमा एक स्वास्थ्यकर्मीले ख’राब पीपीईका कारण ज्यान गु’माउनु परेको छ। २३ वर्षीय जोन
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई गर्यो तीन अर्ब ४८ करोड सहयोग
विश्व बैंकले कोभिड–१९ आपत्कालीन प्रतिकार्य स्वास्थ्य प्रणाली तयारी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई रु तीन अर्ब
लकडाउन अझै दुई सातासम्म लम्बिने
चैत २५, २०७६ काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै दुई साता कठिन चुनौतीको सामना
आज राति आकासमा देखिएको चन्द्रमाको फरक रङ : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी फैलिएको बेला, यो राम्रो योग नभएको ज्योतिषको भनाइ !
हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनः अमेरिकालाई आवश्यक, भारतमा बन्छ तर चीनले नचाहे अमेरिकाले पाउँदैन
कोरोना भाइरसलाई लिएर यी चिनियाँ वैज्ञानिकले दिए यस्तो डरलाग्दो चेतावनी
कोरोनाभाइरस: स,ङ्क्र,म,ण रोक्न घरपालुवा जनावरलाई अनावश्यक न,छु,न सुझाव
७६ दिनपछि खुल्यो वुहान